Malagasy aho: 5 oct. 2009
Publié par Malagasy aho à 22:01 Aucun commentaire:
En conséquence, j’exhorte tous les patriotes à se donner la main pour la réalisation de cette réunion et de soutenir par la prière tous les participants.
Ry vahoaka malagasy
Velom-panantenana isika taorian’ny nahavitan’ireny fifanarahana tany Maputo ireny . Indrisy anefa fa na inona na inona ezaka sy famelana ny ambo-po manokana nataoko sy nataontsika dia tetsy andaniny tsy nisy mihintsy fahavononana hanatanteraka izay nifanarahana.
Tsy misy fitsaharana ny fisamborana olona amin’ny tsy antony, Isan-andro vaky ny fandrobana ny harem-pirenena toy ny vatosoa haondrana antsokosoko sy ireo hazo saro-bidy izay harem-pirenena tsy ho voaverina intsony alohan’ny roanjato taona raha haingana indrindra. Potika tanteraka ny fiari-karena, an-arivony isan-andro no very asa noho ny fikatonan’ny orinasa etsy sy eroa. Tsy mitsahatra miakatra andro aman-alina ny vidim-piainana, isika anefa mbola tsy tena ao anatin’ny maitso ahitra akory. Mirongatra izay tsy izy ny asan-jiolahy ary henoko sy tsapako tsara ny fitaintainan’ny vahoaka noho ny fandrina andriran-antsy. Toa very an-javony ilay fanjakana tan-dalàna, lavitry ny kolikoly nimatimatesantsika. Potika tsy ampy fikarakarana ireo foto drafitr-asa nandaniana mondro-kely.
Ary dia maha-ontsa ahy tokoa ny mijery sy mieritreritra ireto ankizy tsy tafiditra an-tsekoly noho ny tsy fahampiana ary ny efa tany aza tsy tafaverina fa najanona.
Toa lasa tsianjery fotsiny ny filazana hoe « Hoan’ny tombotsoa ambonin’ny firenena » fa mpitari- bato vilam-bava ka ny firain’ny vava hafa ary ny firain’ny tanana hafa.
Handray ny Groupe International de Contact (Gic) eto Antananarivo isika amin’ny 06 oktobra 2009 ho avy izao mba hanohizana ny fitadiavana ny lalana hivoahan’ny firenena amin’izao krizy izao.
Heveriko fa ny fikasana na fihetsika rehetra entina hisakanana ny fahatomombanan’izany antsakany sy an-davany dia finiavana ankitsirano fotsiny izao tsy hamaha ny olana ary mitory tanteraka tsy fitiavan-tanindrazana.
Koa manainga antsika rehetra aho hifanome-tanana amin’ny fanatontosana fivoriana sy hitondra amim-bavaka ireo mpitantatana sy mpandray anjara amin’izany.
Mino koa anefa aho fa ny lova lehibe indrindra azontsika rehetra velona ankehitriny, hapetraka hoan ‘ny firenena sy fara aman-dimby dia Madagasikara milamina sy mandroso, fitaratra hoan’i Afrika sy izao tontolo izao
Tsy ho henatra ho antsika intsony izany fandrobam-pahefana izany ary tsy ho ekentsika intsony koa.
Ny lalana hahatongavantsika amin’izany dia :
· Ny fifehezana ny mpanao politika hanaja tsy misy fepetra hatrany ny safidin’ny besinimaro ;
· Ny tsy fanekena ny fanomezahana vahana na rahoviana na rahoviana ny mpanongam-panjakana ;
Izany no foto-kevi-dehibe efa nataonay re-tany, ren-danitra tany Maputo ary mifanaraka amin’ny fifampifehazana iraisam-pirenena ka hankatoavin’izao tontolo izao.
Ankehitriny ary dia manana adidy isika malagasy sy ireo mpikambana ao amin’ny GIC, hitsipaka hatramin’ny farany izay rehetra hevitra sy tetika hitazonana an’i Andry Rajoelina sy Monja Roindefo hitantana an’i Madagasikara, na dia ao amin’ny tetezamita aza, raha tsy mbola voafidin’ny besinimaro tamin’alalan’ny latsa-bato izy ireo, fa tsy lany olo-manga sy tia tanidrazana ary tsara sitra-po akory i Madagasikar
Koa mahereza daholo ary fa homba antsika Andriamanitra
02 OKTOBRA 2009
Publié par Malagasy aho à 08:13 Aucun commentaire:
Publié par Malagasy aho à 00:14 Aucun commentaire: